အင်္ဂလိပ်စာကိုထိရောက်မှုရှိအောင် ဘယ်လိုလေ့လာသင့်လဲ? - Wall Street English
Blog / Learning English Tips and Hints / Parents
အင်္ဂလိပ်စာကို ထိရောက်မှုရှိအောင် ဘယ်လိုလေ့လာသင့်လဲ?
စာအုပ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေက တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်မလဲ၊ သိပြီးသားနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို ရွေးချယ်ရတာ ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ English Level နဲ့သင့်တော်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုပဲလေ့ကျင့်ပါ
ကိုယ့်အတွက် လွယ်ကူလွန်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခက်ခဲလွန်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို လုပ်ရတဲ့အခါ ပျင်းလာတာ၊ စိတ်ညစ်လာရတာမျိုးတွေ ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ Wall Street English မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုမျိုးတွေကြုံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နည်းနည်းချင်းစီ ဒါပေမယ့် မကြာခဏလေ့ကျင့်ပါ။
အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာထက် သင်ခန်းစာအတိုလေးတွေကို ခဏခဏ လုပ်ဆောင်ခြင်းက ပိုကောင်းတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Wall Street English မှာ သင်တန်းသားတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ချင်တဲ့နေရာ၊ လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ အလျဉ်းသင့်သလို အချိန်မရွေး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Online Interactive Lesson တွေနဲ့ Digital Workbooks တွေကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
English Skill အားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပါ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ခန်းလို့ ပြောလိုက်တိုင်း “Grammar” သင်ခန်းစာတွေကိုပဲ ပြေးမြင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ Reading နဲ့ Writing ကိုအာရုံစိုက်သလိုပဲ Speaking နဲ့ Listening ကိုပါ စနစ်တကျသင်ယူသင့်ပါတယ်။ Wall Street English မှာသင်ကြားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ သင်တန်းသားအားလုံးအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို တကယ့်လက်တွေ့မှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့ အတွက် Speaking နဲ့ Listening အဓိကထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပြီး ဒီသင်ခန်းစာတွေထဲမှာမှ Grammar နဲ့ Vocabulary ပိုင်းတွေကို ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခြင်းက ငြီးငွေ့ပျင်းရိဖွယ်ရာ ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။ Wall Street English မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရတဲ့ (Interactive ဖြစ်တဲ့) Digital သင်ခန်းစာတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သိပြီးသား Verbs တွေသင်ခန်းစာတွေကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ မလေ့လာခိုင်းပဲနဲ့ အပြင်မှာတကယ်ကြုံတွေ့ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဓိကသင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါကြောင့် ရင်းနှီးထားတဲ့ အချိန်၊ ငွေကြေးအလိုက် အင်္ဂလိပ်စာကို ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာချင်တယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေကို ပြန်လည်ရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wall Street English က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။